Iskuxidhka Xalaasha BBQ Casho Dalxiis -
Interlaken Xalaal BBQ Casho Cruise
Dalxiis ku socda biyaha cad, buluugga ah ee Harada Thun waa khibrad lama ilaawaan ah. Inta lagu jiro safarka laba-saacada ah ee degdega ah ee ka bilaaban Thun ilaa Interlaken, waxaad ku raaxeysan kartaa cunnooyinka wanaagsan ee Xalaasha ah adiga oo u riyaaqaya muuqaalka Switzerland.
Caalami, Carab ama malaha hilib casiir leh oo solay? Doomaha Xalaal wuxuu u eg yahay ku tumashada Habeenada Carabta. Markabka 'Swiss BBQ Cruise' waxaa ku adeegi doona sayidkiisa sooshalka laftiisa. Interlaken Tourismus, BLS Bernese Oberland Navigation Company iyo Gastro Lac Brienzersee waxay kugu martiqaadayaan inaad kahesho gobolka harada dhinaceeda cuntada.
Hagaha Socdaalka Xalaal ee la isku dhex daray
Switzerland Xalaal Safar
Garoomada diyaaradaha waaweyn ee caalamiga ahi waxay ku yaalliin Zurich, Geneva iyo Basel, iyadoo garoomo diyaaradeed oo yaryar ku yaalliin Lugano iyo Bern.
Dalxiis ku socda biyaha cad, buluugga ah ee Lake Thun waa khibrad lama ilaawaan ah. Intii lagu gudajiray safarkii laba-saacada ahaa ee degdega ahaa ee laga bilaabo Thun ilaa Interlaken, Waxaad ku raaxeysan kartaa cunnooyinka Xalaal ee wanaagsan intaad ku raaxeysaneysid muuqaalka Switzerland.
Doomaha Xalaasha Cuntada ee Manohra @ Anantara Riverside Resort
Ka soo qaad Bangkok bartamaha Hoteelada
Qaadashada jawiga markii aan ku qadeyneyno markab bariis la beddelay, ama markab qaali ah waxaan ku gudubnay macbudyo dhalaalaya, dhismayaal dhaadheer oo dhalaalaya iyo qulqulka qulqulka socodka wabiga ee habeen kasta naga soo gala.
4 Maalmood Shaqsiyeed Yoga Shaqsiyeed by Kamalaya Resort Koh Samui
Nidaamkayaga afarta maalmood ee nasashada iyo cusbooneysiinta ee Kamalaya, Koh Samui waxaa ku jira dalxiisyada soo socda iyo qaybaha daaweynta.
Naadiga Thana City Country Club, wuxuu ku yaal kaliya 25 daqiiqo bartamaha Bangkok, waa mid ka mid ah koorsooyinka golf-ka ee Koofurta-bari Aasiya oo uu naqshadeeyay kii ugu horreeyay adduunka Greg Norman.
4 maalmood Bangkok | Safarka VIP ee Xalaal ee Peninsula Bangkok
La kulan oo ku salaam hagahaaga gaarka ah ee socdaalka una wareeji hudheelka si aad uga soo gasho Mercedes Benz S-class. VIP Socdaalka degdegga ah ee imaatinka iyo helitaanka qolka nasashada ee VIP ka hor bixitaanka Bangkok.
Maraakiibta Cashada Xalaasha ee Mae Ping River Chiang Mai
Wabiga Mae Ping
Qoo Chiang Mai Habeenimadii caawa fiidkii markab casho ah oo lagu raaco biyaha qabow ee Mae Ping River. Waxaan ugu soo dalxiis tagi doonnaa qaab ahaan waxaanna u bogaadinnaa is-beddelka muuqaalka hareeraha webiga
From	EUR 72
Safarada Magaalada Xalaal
Maalin Nus Xalaal Tours